Banaanbax Rabshado watay oo ka dhacay Magaalada Garoowe – Balcad.com Teyteyleey
Banaanbax Rabshado watay oo ka dhacay Magaalada Garoowe
By Abdi Malik	 On Aug 4, 2017
Magaalada Garoowe ee xarunta Gobolka Nugaal Puntland ayaa maanta waxaa ka dhacay banaanbax ka dhan ah sicir bararka, kororka qiimaha lacagta dollarka iyo diidmada ganacsatada ee lacagta shillinka Soomaaliga.
Dibad baxaan ayaa waxaa ka qaybgalay boqolaal shacab ah oo isugu yimid ugu dambayn barxadda weyn ee Garoowe, iyagoona ganacsatada iyo Madaxda Puntland ugu baaqay in wax laga qabto baahidooda iyo dhibaatada haysata dadka danyarta ah.
Ciidanka ammaanka ayaa il gaar ah ku hayey dhaq dhaqaaqyada mudaharaadka, waxaana sidoo kale ka qaybgalay dad reer guuraa ah oo sicir bararku saameeyay.
Qaar ka mid ah banana baxyaasha oo Warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay ugu baaqen Ganacsatada iyo madaxda Puntland ay wax ka qabtaan kororka qiimaha lacagta dollarka iyo diidmada ganacsatada ee lacagta shillinka Soomaaliga.
The post Banaanbax Rabshado watay oo ka dhacay Magaalada Garoowe appeared first on Ilwareed Online.
Caalim “8-da Kursi Horay Maxkamadda Ayaa U Dhaarisay” Dhageyso
Beesha Baadi Cadde oo Kalsoonida kala Noqotay Hirshabelle iyo Sababta ka dambeys